Côte d’Ivoire: Asa Famonjena Noho ny Maha-Olona Amin’ny Alalan’ny Tenifototra Ao Amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2011 17:29 GMT
Ity lahatsoratra ity dia iray amin'ny tatitra manokana ataonay mikasika ny Korontana Cote d'Ivoire 2011.
Kihon-dàlana lehibe ho an'i Côte d'Ivoire, firenena ao andrefan'i Afrika iny herinandro vao nidify iny. Niatrika olana ara-politika lalina ny firenena nanomboka tamin'ny 3 Desambra 2010, rehefa nanambara an'i Alassane Ouattare ho nivoaka nandresy tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny Komitim-Pifidianana Ivoariana, raha ny Filankevitry ny Lalampanorenana kosa indray dia nanambara fa ny filoha teo aloha, Laurent Gbagbo, no nivoaka ho mpandresy.
Nanomboka teo, nahazo toerana tao an-tanàna ny fifandonana mahery vaika, ary nisy ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina napetraky ny governemantan'i Ouattara nanomboka ny Sabotsy 2 Aprily hatramin'ny Alatsinainy 4 Aprily.
Ao anatin'ity korontana ity, ny tenifototra ao amin'ny Twitter hoe #civ2010 dia nanome loharanom-baovao tena nànana ny toerany teo amin'ny firenena. Na izany aza, maro ireo mpampiasa twitter no nampiakatra ny feony nitaraina fa ilay tenifototra dia nanjary lasa fitaovana nampiasain'ny mpomba ny andaniny sy ny ankilany handrehetana ady.
Kojito R. Gossoum, mibitsika amin'ny solonanarana @N2_language [fr], dia naneho ny fikorontanan-tsainy:
@bish00p [fr] dia manohy:
Ity mpitoraka bilaogy ity, Nnenna, dia nahatsiaro ho voatery mba hamoaka na kely monja ihany aza lahatsoratra am-bilaogy manao hoe ‘Hashtag or Hate-tag‘ (Tenifototra sa Fankahalana fototra), ka ao anatin'izany no anazavany ny dikan'ny #civ2010 fony izy io noforonina, sy ny niafarany ankehitriny :
Edith Brou (@edithbrou) [fr], mpiasa ara-tsosialy iray ao Côte d'Ivoire dia manazava hoe:
Nadira,mpampiasa twitter amin'ny (@Naddah) [fr], “Frantsay iray manana firazanana Alzeriana”, manampy hoe:
Mandritra izany, cartunelo (@cartunelo), mpampiasa Twitter sady mpamorona vohikala monina ao Abidjan, [fr] dia nanomboka nanpiely feo momba ny filàna fanampiana amin'ny maha-olona tamin'ny alàlan'ny #civsocial, mikasika olona iray voatifitra:
Ny tenifototra #civsocial koa dia nanjary lasa toerana iray ifampizaràna torohevitra momba ny fanaovana vonjy voina voalohany ho an'ireo maratra, araka ny fanazavan'i @Naddah [fr]:
Amin'ny fotoanan'ny ady, zava-tsarobidy ny rano ara-pahasalamana; samy nampiasain'ireo mpampiasa Twitter avokoa ny #civ2010 sy #civsocial mba hifampizaràna vaovao amin'ny fomba atao hanadiovana rano. Patience (@zorociv2011) [fr], mpampiasa Twitter iray avy ao Abidjan no nizàra ity manaraka ity:
Ity lahatsoratra ity dia iray am in'ny tatitra manokana ataonay mikasika ny Korontana Cote d'Ivoire 2011.